स्मार्टफोन किन्दा ध्यान दिनुपर्ने ७ कुराहरु - gadgetframe.com
स्मार्टफोन किन्दा ध्यान दिनुपर्ने ७ कुराहरु
GadgetFrame 24 Jul, 2018
के तपाई नयाँ स्मार्टफोन किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? बजारमा बिभिन्न ब्राण्डका फोनहरु देख्न सकिन्छ । हामीलाई मोबाईल किन्दा के के कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नहुदा मोबाईल किन्ने काम धेरै नै झन्झटीलो हुने गर्दछ । यहाँ हामी तपाईलाई मोबाईल किन्दा सामान्यतया के के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा बताउन गईरहेका छौँ ।
Operating System (OS) मोबाईलको सबैभन्दा आधारभुत कुरा हो । सामान्यत, मोबाईलमा २ प्रकारका अपरेटिंग सिस्टम हुने गर्दछ । त्यो भनेको Apple को IOS र Google को Android हुन् । बजारमा Blackberry OS, Windows OS, Garnet OS, Open Web OS जस्ता अन्य अपरेटिंग सिस्टम पनि पाईने गर्दछन् तर यस्ता अपरेटिंग सिस्टम प्रचलनमा भने कमै मात्र देखिन्छन् । अपरेटिंग सिस्टम मोबाईलमा एप्लीकेसन तथा प्रोग्राम रन गर्नकालागी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जसरी इन्जिन बिना गाडी गुड्न सम्भव हुदैन त्यसरी नै OS बिना एप्लीकेसन तथा प्रोग्रामहरु रन गर्न सम्भव हुदैन । यो Windows अपरेटिंग सिस्टम कै परीमार्जित रुप हो जसलाई स–साना डीभाइस मा प्रयोग गर्नकालागी बनाइएको हो ।
मोबाईल किन्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनेको बजेट हो । तपाई कस्तो फोन किन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईको बजेटले धेरैनै प्रभाव पार्ने गर्दछ । आजभोलि बजारमा सामान्यतया, ८ हजार देखी १ लाख वा सो भन्दा माथि मुल्यका मोबाईल फोनहरु उपलब्ध छन् ।
इन्ट्री लेभल: रु १५,०००
मध्यम रेन्ज: रु २५,००० देखि ४०,०००
फ्य्लागशिप (Flagship): रु ४०,००० देखि माथि
यो पनि: नेपालमा पाइने सम्पूर्ण स्मार्टफोनहरुको मूल्यसुची
हरेक बर्ष धेरैजसो मोबाईल कम्पनिहरुले नयाँ नयाँ बिषेशताहरुका साथ बिशेष प्रकारका फोनहरु बजारमा ल्याईरहेका हुन्छन् । जसले हामीलाई दु्रतरुपले बढ्दै गएको प्रविधिसँग जोडीनका लागी मद्दत गर्दछ । यस्ता फोनहरु लामो समयदेखी ग्रहाकले प्रतिक्षा गरेर बसेका हुन्छन् भने अन्य फोन भन्दा महंगो पनि हुन्छ । तथापि यस्ता मोबाईलफोनहरुको रिलिजले अन्य फोनहरुको मुल्य कम हुन जान्छ जसले गर्दा ग्राहकले सस्तो मुल्यमा किन्न सक्छन् ।
डिजाइन भन्ने बितिकै मोबाईलको स्क्रिन साइज, आवरण, त्यसमा प्रयोग गरिएको सामाग्रीतथा त्यसको समग्र स्वरुप पर्दछ । तपाईले फोन समातिरहदा कस्तो महशुस हुन्छ वा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । तपाईले सायद लामो समय देखि फोन प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ होला तर अन्य चिज जस्तै फोन प्रयोग गर्दा पनि आफुलाई सहज महशुस हुनु अत्यन्त जरुरी हुने गर्दछ । सामान्यतया, मोबईल फोनहरुको डिस्प्लेको स्क्रिन साइज ५ देखि ६ इन्चको हुने गर्दछ । समय र बिकासक्रमको गतिसँगै मोबाईल फोनहरुको डिजाईनमा समेत परीवर्तन आउन थालेको छ । बजारमा फरक फरक कलर र डिजाइनका फोनहरु देख्न सकिन्छ । धेरै मानिसहरुले फोन किन्दा डिजाइललाई एकदमै ख्याल गर्ने गरेको पाइन्छ । यि बाहेक मोबाइल किन्दा ध्यान दिनुपर्ने अन्य कुराहरु यसप्रकार छन् ।
Bezel in screen
Having Notch or not
Glass or metal back
मोबाइल कम्पनिहरुकोलागी क्यामेरा यस्तो फिचर हो जसको कारणले गर्दा उनीहरुले आफ्नो फोन बजारमा सहजै बेच्न सक्छन् । आजभोलि प्राय सबैजसो फोनहरुमा राम्रो मेगापिक्सेलका क्यामेरा हुने गर्दछन् । साथै फ्रन्ट, ब्याक क्यामेराका साथै डबल क्यामेरा समेत हुने गर्दछ । फोटो तथा भिडियो कत्तिको गुणस्तरीय छन् भन्ने कुरा क्यामेराको मेगापिक्सेल र इमेज साइज भन्दा पनि मोबाइलमा भएको सेन्सर, चिपसेट, सफ्ट्वयर प्रोसेसिङ, तथा एपाचरमा भर पर्दछ । त्यसैले, यदि तपाई अफ्नो बजेट भित्र राम्रो क्यामेरा सहितको फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने specification भन्दा पनि फोटो तथा भिडियोको क्वालिटी तुलना गर्नु जरुरी हुने गर्दछ ।
मोबाइल स्टोरेज भन्नाले मोबाईले डाटा स्टोर गर्न सक्ने क्षमता हो । मोबाईलमा कम्तिमा पनि ३२ जिबिको स्टोरेज भएमा सामान्य केहि याप, फोटो तथा भिडियोहरु राख्न सकिन्छ । बजारमा आजभोलि microSD card सहितका त्यो भन्दा धेरै जिबि का फोनहरु पाइने गर्दछ । तपाईको मोबाईलको memory space को साथ साथै तपाईको मोबाईलमा RAM कति छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसले तपाईको मोबाईललाई slow हुन तथा hang हुन बाट बचाउने गर्दछ । सामान्यत, ३२ GB storage का लागी ३ GB RAM र ६४ GB storage का लागी ४ GB RAM हुनु उपयुक्त मानिन्छ । तपाई आफ्नो मोबाईलमा के कस्ता प्रकारका data हरु राख्न चाहनुहुन्छ बिश्लेषण गर्नुहोस् र आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म सबैभन्दा धेरै स्टोरेज भएको फोन छान्नुहोस् ।
मोबाईल किन्दा जहिले पनि ब्याट्री कति समयसम्म टिक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यदी तपाई लामो समयसम्म ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुन्न भने त झनै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सामान्यत, स्मार्ट फोनहरुमा ४००० mAh(मिलि एम्पियेर हावर) सम्मका ब्याट्री हुने गर्दछ । यदि तपाइ ब्याट्रीको साइज ठुलो हुदैमा ब्याट्री धेरै टिक्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भनेचाही बिलकुल गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । मोबाइलमा ब्याट्रीको साइज कत्रो छ भन्दा पनि मोबाईल एक पटक चार्ज गरेपछी कति समयसम्म टिक्छ भन्नेकुरा महत्वपुर्ण हुने गर्दछ ।
मोबाईल किन्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को मुख्य कुरा भनेको नै processor हो । जति राम्रो quality को processor भयो मोबाईलले त्यतिनै राम्रो काम गर्न सक्छ । आजभोलि बिभिन्न कम्पनिहरुले processor बजारमा ल्याएका छन् । जसरी CPU बिना Computer चल्दैन त्यसरीनै processor बिना मोबाईल चलाउन सम्भव हुदैन । यदि तपाईको मोबाईलको processor quality राम्रो छैन भने जतिनै धेरै RAM को मोबाईल भएपनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन । तर कम्तिमा पनि २ GB RAM भने हुन जरुरी हुने गर्दछ । आजभोलि सामान्यत मोबाइलहरुमा Quad core processor को प्रयोग गरेको पाईन्छ तर तुलनात्मक रुपमा महंगा र राम्रा फोनहरुमा भनै Octa core processor को प्रयोग गरेको पाईन्छ । यदि तपाई लामो समयसम्म मोबाईलमा game खेलेर समय बिताउने गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाईलमा GPU(Graphic Processor) पनि हुन जरुरी हुन्छ ।
अन्य कुराहरु (बोनस)
Fast charging/wireless charging
Headphone slots and Jack
Durability- Water and heat resistance
Face Unlocking/ AI
Startup time of applications
Social Media Tax Transperency Issue: Is Government Banning Social Sites?
Samsung Launches M10 in Nepal, priced aggresively at Rs. 13,790